Sidee loo helaa dib-u-qabasho wanaagsan habab bilaash ah?
Xidhiidhka dibedda ama gudaha ah wuxuu u adeegayaa matalaad loogu talagalay SEO wakhtigayaga. Backlinks ayaa aad ugu mahadcelinaysa matoorada raadinta, gaar ahaan Google iyo ka caawiya inay go'aamiyaan darajada bogga ee bogga natiijada raadinta. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha, xiriirada soo galaya ayaa ah qodobka labaad ee Google ee kusalaysan tixgelinta mawduuca. Haddii aan dib loo eegin ganacsigaaga ma muuqan doono macaamiishaada mustaqbalka leh kadibna waxay noqon doonaan wax lumis ah.
Maalmahan, isbeddelka algorithms uma shaqeeyo isla sanado badan ka hor markii tirada xidhiidhada soo galaya ay yihiin qodobbada ugu muhiimsan ee xiriiriyaha waxtar leh. Waqtigaan, mashiinnada raadinta waxay qiimeeyaan tayada dhabarka halkii ay ka tiri lahaayeen. Waa mid muhiim u ah ilaha aad isku xiraysid iyo sida ay khuseyso waxay ku xiran tahay bogga internetka. Dhab ahaan, makiinadaha raadinta waxay isticmaalaan waxyaabo badan si loo go'aamiyo tayada xiriirrada galmada ee goobaha liisaska. Si kastaba ha noqotee, dhisayaasha khibrad u leh khibraduhu waxay kala saaraan afar qaybood oo ballaadhan - isudheellitirnaan, kalsooni, kala duwanaanta, iyo maamulka. Sidaas daraadeed, dhamaan xiriiradaada soo galeysa waa inay raacaan afartan shuruudood ee loo baahan yahay. Haddii aysan raacin shuruudahaas, waa inaad isku daydaa inaad hagaajisid tayada ama isticmaalka Google Disagning Tool si aad uga saarto dhammaantood.
Sidaa daraadeed, aan ka wada hadalnay qaar ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida loo helo dib-u-eegis tayo leh oo laga helo bogagyo la isku halleyn karo oo lagu kalsoonaan karo.
Siyaabaha loo helo dib u hagaajin wanaagsan si loo hagaajiyo darajo bogga
. Habka ugu muhiimsan ee loo abuuro backlinks waa in la soo saaro waxyaabaha tayada iyo xiisaha leh si dadka isticmaala ula xiriiraan. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii, mar walba ma dhacdo. Habka ugu wax ku oolka ah waa in lagu bartilmaameedsado ilaha websaydhka sare leh oo leh waxyaabo ay jecel yihiin inay isku xiraan. Dhibaatadu waxay tahay in ay adagtahay in la helo xiriirro ka yimaada boggaga sare ee PageRank sababtoo ah waxay ku shaqeeyaan oo keliya goobo caan ah oo leh heerar tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, cutubkan, waxaanu kugu soo aruurineynaa qaar ka mid ah istaraatijiyadaha isku xirnaanta xiriirinta oo kaa caawin doona inaad hesho dib u habeyn fiican.
Farsamaynta manida dhaqdhaqaaqa ee ay sameeyeen Brian Dean
Waxaad ubaahan tahay inaad sameysid cilmi-baaris suuqa oo aad ka heleyso bogag ama bogag websaydh ah oo aan hadda la heli karin. Marxaladda soo socota, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho farsamooyin xiriirin xirfadle ah oo aad ku ogaatid goobaha isku xiraya bogga aan jirin. Si aad u hesho macluumaadkaan waxaad isticmaali kartaa Analyteth Web Site ama Majestic Crawling Tool. Marxaladda soo socota, waxaad u baahan tahay inaad kala soocdo khadka ku habboon warshadahaaga iyo meelaha qiimaha leh. Abuuri gabal cusub oo ka kooban ama qaado mid ka mid ah maqaashaada hadda jira haddii ay ku dhajiyaan dhibicda iyo bixiyaan milkiilayaasha goobta si ay u bedelaan xiriirada aan la heli karin ee cusub ee ka socda goobtaada. Xaaladaha intooda badan, milkiilayaasha bogagga ayaa isku raacay hindisahan maxaa yeelay waa fursad aad u wanaagsan iyaga si ay u kobciyaan astaanta xiriirkooda iyada oo mid kale oo dhab ah.
Nidaamka isku-beddelka ee is-beddelka
Marka ugu horeysa, waxay u muuqan kartaa sida farsamada dhismaha ee hore ee Brian Dean. Si kastaba ha noqotee, ma aha mid la mid ah si caadi ah. Marka loo eego habkan, waxaad u baahan tahay inaad falanqeyn karto domainsadaada la raadiyey iyo inaad ogaato xiriirka jaban oo keenaya bogag aan la heli karin. Kadib marka la isticmaalo Isticmaalka Kormeeraha Xirfadlaha Google ee Qalalaasaha Qalalaasaha Chrome, waxaad u baahan tahay inaad raadiso xiriiriye kuwaas oo tilmaamaya bogag qaldan oo laga helo il gaar ah. Adiga oo isticmaalaya kordhintaan Google, waxaad awoodi doontaa inaad heshid tiro tirooyin ah oo xiriirsan oo jaban. Waxaad ubaahan tahay inaad xalliso xiriiriyahan oo aad ka heshid kaliya khuseeya gaadiidka gaadiidka. Markaa waxaad ubaahan tahay inaad abuurto mawduuc mowduuc ah isla mowduucaas oo ku saabsan bogga ku saabsan oo la xiriiro heshiis wanaagsan oo la xiriira cida la beegsaday, iyaga oo ku siinaya inay isku xiraan goobtaada halkii aad ka heli laheyd qaladka Source .